Shabaab oo burburiyay gaari ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya, weerar ka dhacay Gobolka Gedo |
Shabaab oo burburiyay gaari ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya, weerar ka dhacay Gobolka Gedo
Xoogaga Ururka Al Shabaab, ayaa weeraray kolonyo ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya oo maraayay deegaanka Likooley ee Gobolka Gedo, xilli Ciidamadaasi ay sahay u wadeen Ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Ceelcadde, oo 60km u jirta Magaalada Garbahaarey.
Ciidamadan, ayaa ka soo tallaabaday xadka Gobolka Gedo uu la wadaago dalka Kenya, waxaana la weeraray gelinkii dambe ee Arbacadii. Deegaanka Likooley oo weerarku uu ka dhacay, ayaa qiyaastii 40km u jirta Ceelcadde.
Weerarkan, ayaa ku bilowday qarax miino oo horey wadada dhinaceeda loogu diyaariyay, waxaana xigay iska horimaad fool ka fool ah, oo labada dhinac ku dhex maray deegaankaasi.
Dadka deegaanka, ayaa soo sheegaaya in Shabaabku ay qaraxa ku burburiyeen mid ka mid ah kolonyadii lagu galbinaayay sahayda, oo ay saarnayen ugu yaraan 10 ka mid ah Ciidanka Kenya.
Shabaabka, ayaa deegaankaasi dib kaga baxay, ka dib muddo 45 daqiiqadood oo ay kula dagaalamayen Ciidanka Kenya. Gurmad ka soo baxay deegaanka Ceelcadde, ayaa gawaaridii kale u galbiyay deegaankaasi. Eriacta buy online, purchase dapoxetine.
Faah faahin badan lagama haayo inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha labada dhinac ka soo gaaray weerarkaasi, balse dadka deegaanka, ayaa xaqiijiyay labada dhinac dhimasho iyo dhaawacba in weerarkaasi uu ka soo kala gaaray.
Bishan Ramadan, ayaa waxaa mooddaa in mintidiinta Al Shabaab ay xoojiyen weerarada, ay ka gaysanayan Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Somaliya.